ငါ၏အကုတ်အင်္ကျီအောက်မှာအမျိုးသမီးဦးထုပ် - အဘယ်အရာကိုဦးထုပ်တစ်ဦးဂန္နှင့်အတူဝတ်ဆင်ရန်, ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္, oversayz, သားရေကုတ်အင်္ကျီ?
မိမိအကုတ်အင်္ကျီအောက်မှာဦးထုပ် - တစ် headdress အဖြစ်အင်္ကျီကိုကောက်?
မိမိအကုတ်အင်္ကျီအောက်မှာဟက်ရွေးချယ်ထားသောစတိုင်နှင့်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုက်ညီသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိရာသီမှာတော့ထင်ပေါ်ကျော်ကြား couturier ထိရောက်သောဒီဇိုင်းကိုဦးထုပ်အသစ်ရွေးချယ်မှုများပူဇော်ကြ၏။ လမ်းကြောင်းသစ်, ထိုးပြီး beanies နှင့် floppy Fedora အပေါ်ကုလားကာသားမွေးဘင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဖက်ရှင်အင်္ကျီမှဦးထုပ်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှု, stylist သည်နှင့်အညီ, အတော်ကြာယေဘုယျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းရပါမည်:
အဆိုပါပိုကြီးပြီးပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဖြတ်အထက်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း, တစ်ဦးထုပ်ဖြစ်ဖို့ laconic ။
outerwear ပစ္စည်းထုတ်, ပန်းသို့မဟုတ်ထိုစာလုံးနှင့်အတူအလှဆင်လျှင်, ဦးထုပ်ပေါ်မှာအလှဆင်သူအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ရပါမည်။
အင်္ကျီအရောင် outerwear အောက်မှာ Headdress:
Black က။ ရိုးရှင်းစတိုင်က Black ထိပ်တန်းအလွယ်တကူသူမ၏ပါးလွှာ cashmere သို့မဟုတ် floppy အောက်မှာလက်ကိုင်ပဝါကိုကြိုးနဲ့တုတ်မှသားမွေးထဲကဦးထုပ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
အပြာရောင်။ ကောင်းစွာသင့်လျော်သောအရောင်ထုပ်, -, မီးခိုးရောင်အဖြူရောင်, အနက်ရောင်, အဝါနုရောင်ရှိသောသို့မဟုတ်အပြာ။
မီးခိုးရောင်။ အရောင် beanies ကတ္တီပါနီသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်တဲ့အစိမ်းရောင်ထိုးပြီးသားရေဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်။
အနီရောင်။ ထိုကဲ့သို့သောရဲအရောင်နှင့်အတူ delightfully berets, အဖြူရောင်မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အပြာတင့ပေါင်းစပ်။
Beige ။ ဖက်ရှင်ကျွမ်းကျင်သူများကအနက်ရောင်သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်ပြာရောင်ဦးထုပ်နှင့်အတူ outerwear ၌ဤအရောင်ပေါင်းစပ်။
Blugirl, ရင်ခုန်စရာအပူအပင်ကင်းပြီးဖြစ်ကြပြီးဘဝကိုပျော်မွေ့ဖို့ဘယ်လိုသိသောမိန်းကလေးများဖန်တီးအီတလီအမှတ်တံဆိပ်ကနေအမြိုးသမီးအင်္ကျီကိုအဘို့အဦးထုပ်။ လက်ရှိရာသီ၌မိမိ collection များကိုထဲမှာပန်းထုတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပန်းနှင့်အတူ silhouette သင့်လျော်နေကြသည်။ လူငယ်ကမ်းလှမ်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Rossella Jardini ရွေးချယ်စရာဂျီဩမေတြီနှင့်စိတ္တဇဒီဇိုင်းများနှင့်အတူထိုးမပါဘဲထုပ်ထိုးပြီး။ , Unpretentious ရိုးရှင်းပြီးဝတ်ဆင်ဖို့အဆင်ပြေ - ပြုလုပ်ခြင်းသည်စတိုင်မော်ဒယ်များ။
သငျသညျထိုးပြီးရှည်လျားဗားရှင်းကိုရွေးချယ်ပြီးအလှဆင်ခြင်းမရှိဘဲလျှင်မိမိအကုတ်အင်္ကျီ oversayz အောက်မှာ Beanies ဦးထုပ်, သဟဇာတကြည့်ရှုမည်။ အဆိုပါပိုးအိမ်နှင့်ဖြောင့်ဖြတ်ဖို့တစ်ဦးကထိုးပြီး Bini ပါးလွှာပိုကြည့်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ပုံတစ်ပုံကိုရှည်လျားစေနိုင်ပါတယ် Add ပဝါသို့မဟုတ် shawl ကိုက်ညီရန်။ ဖက်ရှင်၏နယူးလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကုလားကာနှင့်တစ်ဦးဘင်နှင့်အတူဦးထုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာအလွန်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်ကြော့ကြည့်ရှုသည်။
ကနေဒါအမှတ်တံဆိပ် Dsquared2 ဖက်ရှင်ကမ္ဘာကလက်ရာမြောက်သောဒီဇိုင်း headdress အံ့အားသင့်။ နာမည်ကြီးနှစ်လုံးကိုဒန်နှင့်ဒင်း Caten ညီအစ်ကိုတွေကို visor နှင့်အရောင်ရောင်စုံ applications များနှင့်အတူအလှဆင်မြင့်မားသောဦးရစ်သရဖူနှင့်အတူ multilayer ဦးထုပ်အဆိုပြုထား။ တစ်ကုတ်အင်္ကျီနှင့်အတူထိုးပြီးဦးထုပ်သူ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်မာ့ခ်ယာကုပ်အမျိုး၏ဖန်ဆင်းရှင်၏ collection များကိုတွင်လည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမကြုံစဖူးအမြင့်နဲ့ volume featured ။
တစ်ဦးထိုးနှင့်အတူအားကစားတင်းကျပ်စွာ-သငျ့ဦးထုပ် - ပြင်သစ်ဖက်ရှင်အိမ်သူအိမ်သား Hermes ယခုရာသီတစ်ဦးထုပ်၏ရိုးရှင်းသောပုံစံပေါ်တွင်ဗေဒရွေးချယ်မှုတော့ဘူး။ viscous ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့အင်္ကျီကိုအောက်တွင်ဦးထုပ် - ရာသီသစ်ကိုလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမော်ဒယ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်ကအဝတ်နှင့်မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်များစွာသောစတိုင်များများအတွက်သင့်လျော်သောကြောင်းဖြစ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။
သင်တစ်ဦးဂန္အမေရိကန်လူငယ်ဖက်ရှင်ဖြစ်သောဒီဇိုင်နာ Tommy Hilfiger, ကနေအင်္ကျီနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်ဖက်ရှင်ရှိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ headdress မှာမြင်နေရတယ်။ ဤရွေ့ကား Pom-poms အတူအမျိုးမျိုးသောရောင်စုံထိုးပြီး beanie ခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤမော်ဒယ်များဿုံနေ့စဉ်နှင့်ပြိုင်ကားဆန်သောစတိုင်အဘို့အဝတ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်နှင့်များစွာသောကမ္ဘာ့အတန်းအစားဒီဇိုင်နာများ၏ collection များကိုများတွင်ပစ္စုပ္ပန်။ လမ်းကြောင်းသစ်ယခုရာသီအတုအမွေးများ၏ pompom ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကြော့နဲ့လှပတဲ့လှပါတယ်။
တင်းကျပ်သော Pardes ၏ Admiral တလျှောက်အထက်၏သေံအတွက်ဘင်နှင့်အတူ "ဦးခေါင်းအဘို့အဝတ်" ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းသောပေါင်းစပ်ဂန္လျှို့ဝှက်နှင့်အတူထိုးပြီးကြီးမားတဲ့အတွက်ဘင်ကြာလှပါတယ်။ ပုံစံမျိုး stylist ၏ဒြပ်စင်နဲ့သူ့ရဲ့အင်္ကျီကိုအောက်တွင်ဦးထုပ်အနည်းငယ် silhouette အကြံပြု:
ဘဲဥပုံ။ အကြီးအ scarves, berets, scarves နှင့်ဦးထုပ်ကိုကြည့်သောစံပြမျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်။
စက်ဝိုင်း။ ခမ်းနား ensemble ကျယ်-brimmed floppy berets နဲ့ volume ဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။
တြိဂံ။ ပုံစံမျိုးနှင့် pompons ခြင်းမရှိဘဲ, ကျယ်ပြန့်နဖူးကိုဖုံးလွှမ်းသောအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ရင်ပြင်။ Earflaps သို့မဟုတ်လူငယ် bomper - ကိုအကောင်းဆုံး option ကို။
ရှေးခယျြသောဆံပင်အရောင်အပေါ်သူ၏ကုတ်အင်္ကျီအောက်မှာဟက်လွယ်ကူသည်, အနည်းငယ် features တွေကိုသိရန်လိုအပ်ပါ:
ဆံပင်ရွှေရောင်။ ဒါဟာအနက်ရောင်အပြာ, မီးခိုးရောင်နဲ့ပန်းရောင်ဦးထုပ်၏အရိပ်အဘို့အရွေးချယ် သာ. ကောင်း၏။
ဘရောင်းဆံပင်။ အပြာအညို, အနက်ရောင်နှင့်ကော်ဖီအရောင်တစ်ဦးကလှပသောပေါင်းစပ်။
အနက်ရောင်ဆံရှင်။ Win-Win ဟာအနီ, အပြာနှင့်အ burgundy အရိပ်၌တည်ရှိ၏။
အနီရောင်။ ပိုကောင်းတဲ့အဝါရောင်, အစိမ်းရောင်, အညိုရောင်နှင့်အစိမ်းမှ preference ကိုပေးစေခြင်းငှါ။
ကုတ်အင်္ကျီမှ Headdress oversayz
တစ်ကုတ်အင်္ကျီ oversayz ဝတ်ဆင်ရန်ဦးထုပ်၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကပုံရိပ်ထဲမှာ stylist ဦးတည်ချက်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ထိုသူတို့၏ရွေးချယ်မှုစေရန်ဤအခြေခံပေါ်မှာ။ ဥပမာအားဖြင့်, အီတလီဖက်ရှင်အိမ်သူအိမ်သား Prada အမျိုးမျိုးသောဒီဇိုင်းသူတို့ရဲ့ collection များကို Breton အဘိဓါန်ထုပ်အတွက်အကြံပြုသည်။ ကျောက်များနှင့်ဣတ္ဝက်သား-ပိုင်နှင့်အတူအလှဆင်မိမိနားကိုအုပ်စိုးပတ်တီး,: အ Chanel ရှိုးမှာဒဏ္ဍာရီကားလ် Lagerfeld ဦးထုပ်အများအပြားမျိုးကွဲ featured ။ တောင်မှကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများအဝတ်အစားစတိုင်လ် berets, သားမွေးခြင်းနှင့်ထိုးပြီး beanies, LIC နှင့် slauchem ဖြည့်စွတ် oversayz အကြံပြုပါသည်။
ပြင်သစ်အမှတ်တံဆိပ်မာတင် Grant ကကနေဂန္အင်္ကျီမှဦးထုပ်တစ် slouch နှင့်အတူတစ်ဦးထူးခြားကြော့အနက်ရောင်ဦးထုပ်သည်နှင့်တင်းကျပ်သောအရောင်များအတွက်အဝတ်ကိုဖြည့်မယ့်ဖဲကြိုးအားဖြင့်ပယ်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Dior ဖက်ရှင်အိမ်သူအိမ်သားဂန္တုတ်ကျင်းအင်္ကျီကိုသူ့ရဲ့စုဆောင်းမှုအရေပြားကနေယူတတ်၏အလှဆင်။ တစ်ဦးကနာမည်ကျော်အီတလီအမှတ်တံဆိပ် Beatrice B ကို rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်နှင့်အတူစမတ် slauch အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ဦးဂန္ကုတ်အင်္ကျီအဘို့အဦးထုပ်, stylist သည်နှင့်အညီ, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားစတိုင်ရှိသည်စေခြင်းငှါ, ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများထားပေမယ့်ထိပ်တန်းမတ်မတ်ထက်မဲမှောင်2ရိပ်ပေါ်အကောင်းဆုံးပုံစံကိုရွေးချယ်ဖို့:
သိုးမွှေး berets ။
တစ်သားမွေးကော်လာနဲ့သူ့ရဲ့အင်္ကျီကိုအောက်မှာ artificial အစိမ်းရောင်သားမွေးဦးထုပ်အီတလီအမှတ်တံဆိပ် Miu Miu မှာရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာပေါ်ပြခဲ့သည်။ Multi-အလွှာများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောပေါင်းစပ်နှင့်အတူစမ်းသပ်အမှတ်တံဆိပ် Chitose ရှင်ဇိုအာဘေး Sacai ၏ ​​creative director ။ သူကသားမွေးထိုးနှင့်အတူလျှပ်ကာဦးထုပ်အကြံပြုသည်။ Irrepressible တီထွင်သူအမေရိကန်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Marc Jacobs ထူသောအထည်ကိုကုတ်အင်္ကျီ၏မျိုးစုံဦးထုပ်မှအများပြည်သူပြသသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, animalistic ထုတ်နှင့်အတူ 70 ရဲ့ style အတွက်ခေါင်းလောင်း၏ပုံစံအတွက်ဦးထုပ်။
အီတလီဒီဇိုင်နာ Fausto Puglisi နေဦးထုပ်နှင့်အတူစောင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအင်္ကျီပု kitsch ၏မတ်ေတာ, အချိုးမညီဖြတ်တောက်မှုနှင့်အထည်နှင့်အရောင်ရဲရင့်ပေါင်းစပ်ထူးခြားမှုဖြစ်စေသည်။ ပုံစံအတွက် rounded ဦးရစ်သရဖူနှင့်အတူဦးထုပ်အနက်ရောင်ကျယ် brimmed ဦးထုပ်ပေးအပ်သည်။ အင်္ဂလိပ်အမှတ်တံဆိပ် Stella McCartney အရောင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူမူရင်းလက်ကိုင်ပဝါ၏ပုံသဏ်ဌာမှထည့်သွင်းဖို့အဆိုပြုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ more options ကမ္ဘာ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများကနေစောင်အဝတ်အစားအသုံးအဆောင်များဦး:
Pom-Pom နှင့်အတူ beanies;
တစ်ဦးထုပ် Fedora နှင့်အတူအထူသောအထည်ကိုမီးခိုးရောင်အင်္ကျီ၏ခမ်းနားဝတ်လုံ Dior ကနေအမျိုးသမီးအဝတ်အစား၏နောက်ဆုံးပေါ် Haute couture စုဆောင်းမှုထဲတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပုံရိပ်စတိုင်နှင့်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောကြည့်ရှု! ခါးပတ်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူလူငယ်ဂါဝန်နေဆဲအများအပြားဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများအတွက်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ကဖြည့်:
1957 ခုနှစ်စပိန်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Cristobal Balenciaga ကမ္ဘာကြီးကိုချောမွေ့လိုင်းများနှင့်အတူထူးခြားတဲ့ဖက်ရှင်မော်ဒယ် ပေး. ကျယ်ပြန့်အင်္ကျီလက်ဝိုင်း - ပိုးအိမ်။ ဤအမှုကိုကျယ်ပြန့်သည်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းလွင်ပြင်တိတ်ဆိတ်အရောင်များကိုရွေးချယ်ဖို့, ဒီကိစ်စတှငျ, ပိုကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီဗဟိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုးအိမ်ကုတ်အင်္ကျီတစ် headpiece ရွေးချယ်တဲ့အခါ preference ကိုပေးစေခြင်းငှါ သာ. ကောင်း၏:
အနက်ရောင်အဖြူနှင့်အညို - အရှိဆုံးကိစ္စများတွင်သားရေ outerwear တင်းကျပ်သောအရောင်များကိုပြု။ အတူတူအရိပ်၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းကို select ဤကိစ္စများတွင်ပိုကောင်းတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်ကျော်ကြားဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများ၏ collection များကိုများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အီတလီဒီဇိုင်နာ Miuccia Prada, နောက်ဆုံးပြပွဲ, multi-ရောင်စုံသားရေ Upper နှင့် တွဲဖက်. တစ် visor နှင့်အတူအလှဆင်အမြောက်အများထိုးပြီးဦးထုပ်နှစ်သက်တော်မူ၏။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Giorgio Armani, တိုတောင်းသောလယ်ကွင်းတွေနဲ့တစ်ဦးထုပ်ဝက်သား-ပိုင်များကပြည့်စုံသောအသားအရေရဲ့ဖက်ရှင်ကမ္ဘာကခြင်းကိုမော်ဒယ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။
အရေပြားတစ်ကုတ်အင်္ကျီနှင့်အတူဦးထုပ်ခံစားရတယ်, stylist သည်နှင့်အညီ, လူငယ်တစ်ဦးအောင်မြင်သောပုံရိပ်ဖန်တီးရန်ပြီးပြည့်စုံသောတွဲဖက်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေဆဲဦးထုပ်ကိုသုံးနိုင်သည်:
အားကစား waterproof စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
ဇာထိုးချည်၏အိတ် - ပုံမှန်အတိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏မူရင်းဆုံးဖြတ်ချက်
နစ်ခ်ကိုချောင်းမြောင်း - Silver, အစွန်းအထင်း Glass ကို
မီးဖိုချောင်ထဲမှာနံရံ - စိတ်ကူး
န့်ကိုမိတ်ဆက် - ကိုအကောင်းဆုံးအချိုပွဲအဘို့အချက်ပြုတ်နည်းများစုံလင်သော crispy မုန့်စိမ်းနှင့် toppings
Listeriosis - လက္ခဏာများ
Tsiniya - ပျိုးပင်များစိုက်ပျိုးရန်အခါ, မျိုးစပါးကြီးထွားလာအရေးကြီးသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစိုက်ပျိုး